Margarekha » नेपाली काँग्रेसले बाढीपिढीहरुलाई स्वास्थ सेवा दिनका लागी निशुल्क स्वास्थ शिबिर सुरु
नेपाली काँग्रेसले बाढीपिढीहरुलाई स्वास्थ सेवा दिनका लागी निशुल्क स्वास्थ शिबिर सुरु
फत्तेपुर बाँके भाद्र १५ । बाढीपिढीहरुलाई स्वास्थ सेवा दिने उद्ेश्यका साथ बिहिबार नेपाली काँग्रेस बाँके क्षेत्र नं १ ले राप्ती सुनारी गाउपालिकाको वार्ड न ६को फत्तेपुर गाउमा निशुल्क स्वास्थ शिबिर संचालन गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोईरालाले शुभारम्भ गर्नु भएको स्वास्थ शिबिरमा ३०० जना महिला र २१५ जना पुरुर्ष गरि ५१५ जना बाढीपिढीतहरुको स्बास्थ जाँच गरि निशुल्क औषधी बितरण गरेको स्वास्थ शिबिर व्यवस्थाप याम बहादुर खडकाले जनाएका छन ।
नेपालगन्ज मेडिक कलेजका छाला तथा यौवनरोग बिशषेज्ञ डा कपिल पान्डेका नेतृत्वमा १३ जना चिकित्सक एवम स्वास्थकर्मिहरुले बाढीपिढीतहरुको स्वास्थ परिक्षण गरेको कुरा नेपाली काँग्रेस बाँके क्षेत्र न. १ का क्षेत्रिय सभापति माधवराम खत्रीले जनाएका छन ।
स्वास्थ शिबिरमा अधिकाश बाढीपिढीतहरुमा छाला समबन्धी रोगका साथै भाइरल ज्वरो,रुघाखोकीको समबन्धी रोग देखापरेको कुरा डा कपिल पान्डे जनाएका छन । बाँके निर्बाचन क्षेत्र न.१ बिभिन्न स्थानमा आएको बाढी प्रभाबित क्षेत्रमा स्वास्थ शिबिर संचान गरिने ा नेपाली काँग्रेस बाँके क्षेत्र न. १ का क्षेत्रिय सभापति माधवराम खत्रीले जनाएका छन ।
बेलायत र अफ्रिकी मुलुकहरूमा देखिएको कोराेना भइरसको नयाँ संस्करण नेपालमा पनि तीनजनामा
बेलायत र अफ्रिकी मुलुकहरूमा देखिएको कोराेना भइरसको नयाँ संस्करण नेपालमा पनि तीनजनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार...
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिको समग्र बिकाश गर्नेका लागी राष्ट्रिय योजना आयोगसंग करोडौंका योजना माग
नरैनापुर(बाँके), माघ ५ । नरैनापुर गाउँपालिकाले राष्ट्रिय योजना आयोगसंग करोडौंका योजना माग गरेको छ । आयोगले गत मंसिर ३० गते सूचना प्रकाशित गरेर स्थानीय तहबाट...
सोमबार थप ३२२ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २ लाख ६७ हजार ६४४ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका...
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च मा बहस जति बेला मन लाग्यो संसद विघटन? जति बेला मन लाग्यो चुनाव?’
काठमाडौँ- संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ। यसअघि शुक्रबारसम्म संवैधानिक इजलासमा बहस अगाडि बढाउने...